ပို့စ်တင်ချိန် - 7/12/2014 02:03:00 PM
မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရား တစ်ခုခုဖြင့် အခြားလူတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားတစ်ခုကို ထိခိုက်ပုတ်ခတ် ရှုတ်ချခြင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင် မိမိကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားကို ပြန်လည်ပုတ်ခတ်ပြီး၊ ရှုတ်ချပြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ် . . .
ဤမျှကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများ၏အစည်းအဝေးကြီး မှာပါဝင်ခွင့်၊ စကားပြောခွင့်ရတဲ့ အတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်ပါတယ်။ အထူးအားဖြင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်နှင့် ယဉ်ကျေး မှုအမွေအနှစ် တို့၏ စုဝေးရာ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့တော် စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့က သမ္မတ ဗောရစ်ယယ့်လ်ဆင် အထိမ်း အမှတ် စာကြည့်တိုက်ကြီးမှာ နိုင်ငံပေါင်း (၃၅)နိုင်ငံမှ ၀န်ကြီးများ၊ သံအမတ်ကြီးများ၊ ဘာသာရေး(၅)ခုမှ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များရဲ့ အစည်းအဝေးကြီးမှာ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု မတူကွဲပြားကြစေကာမူ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးအကြောင်း စကားပြောခွင့်ရ လို့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော် ကြီးပေါင်း (၅)သိန်း ကျော်တို့ ကိုယ်စား အထူးပင်ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်ရပါကြောင်းနှင့် ဤမျှကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အစည်း အဝေးကြီးအတွက် စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက်ကြသော ရုရှားအစိုးရယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီးနှင့် ၀န်ထမ်းများ အားလုံးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုချီးကျူး ရပါကြောင်း လှိုက်လှဲစွာပြောကြားပါရစေ။
ဒီကနေ့ ကျွန်ုပ်တို့တစ်တွေဟာ နိုင်ငံ ရေးစနစ်၊ စီးပွားရေးစနစ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာစ သည်ဖြင့် မတူကွဲ ပြားခြားနားသော ကမ္ဘာကြီး မှာ နေထိုင် နေကြရ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မတူ ညီနိုင်သော အချက်အလက်တွေကို ငြင်းခုံ၍ မနေကြဘဲ တူညီသောအချက် အပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ လက်တွဲသွား ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိကသားတစ်ယောက်နှင့် တရုတ် ပြည်သူတစ်ယောက် ပေါင်းသင်းနေထိုင် ကြရာမှာ သူတို့နှစ် ယောက်အသား အရောင် ပေါ်မှာ ငြင်းခုံခြင်းမပြုကြလို့ ““ချစ်တာသာ ပဓာန”” စိတ်ထား နိုင်ကြလို့ Love ဆိုတဲ့ Common Platform ပေါ်မှာ လက်တွဲပြီး ဘ၀ခရီးလျှောက်နိုင်ကြ တာပေါ့။…
ဤယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်က အမျိုးမျိုးကွဲ ပြားနေကြသော လူသားတွေမှာ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြား နားသော ပြဿ နာများနှင့် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားသော သဘောထား၊ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ၊ခံယူ ချက်တွေ ရှိနေ ကြမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ “ပြဿနာတွေရှိတယ်”” ဆိုတဲ့နေရာမှာ အားလုံးတူ တယ်။ အဖြေရှာနေကြတယ်ဆိုတဲ့ အချက်မှာ လည်း အားလုံးတူတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီလူ့ဘ၀ ပြဿနာတွေရဲ့ အပြီးသတ်အဖြေ ဆိုတာ တကယ်ရှိ လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် “ကွဲပြားခြင်းထဲမှာ ညီညွှတ်ခြင်း” ရှိတယ် (Unity in Diversity) ဆိုတဲ့ အချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရလိမ့်မယ်။ ဥပမာကုန်း မြေပေါ်မှာ မြစ်တွေဟာအမည် အမျိုးမျိုး ကွဲနေပါတယ်။ သိမ်းမြစ်၊ ရိုင်းမြစ်၊ နိုင်းမြစ်၊ ဗော်လဂါမြစ်၊ ဂင်္ဂါမြစ်၊ ဧရာဝတီမြစ်စသည် ပေါ့။ အဲဒီလိုကွဲပြားနေတဲ့ အမည်တွေ ထဲမှာ ရေကိုမြင်အောင် ကြည့်လိုက်လျှင် ကွဲပြား ခြင်းထဲက တူညီခြင်းကိုရပါတယ်။ အဲဒီလို တူညီမှုတို့ကို စုစည်းနိုင်မှသာ အားလုံး လက်ခံနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Common Platform တည်ဆောက်နိုင်မှလည်း ပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် လုံခြုံရေးတို့ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤမျှလောက်များပြားသော ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေးတွေ ကွဲပြားနေကြစေကာမူ- အားလုံး သော ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးခေါင်း ဆောင်တွေဟာ ဘာသာရေးတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား၊ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကြား ပေါင်းကူးတံတားများ တည်ဆောက်နိုင်ကြမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လူသား အချင်းချင်း ပို၍ကောင်းမွန်သော နားလည်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေ ရရှိကြပါလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ပဋိပက္ခတွေကို ရှောင်ရှားပြီး စိတ်ဓာတ်တင်းမာမှုတွေလည်း လျော့ပါးသွား လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်စွဲမြဲစွာ ယုံကြည်တယ်။ တံတား တစ်ခုဆောက်ထားလျှင် လမ်းကြောင်း နှစ်ဖက်ကလာသူတွေဟာ ဒီတံတားပေါ်မှာ ဖြတ်လျှောက်ကြရမှာဖြစ်လို့ တံတားပေါ်မှာ ဆုံတွေ့ကြမှာပါ။ ရှောင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ အတူတကွ ဆုံတွေ့ကြရာမှာ အတူတကွ အလုပ်ဖြစ်သွားကြမှာပါ။ ရေစီးကြမ်းတဲ့ မြစ်ချောင်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ လမ်းကြောင်း တစ်ဖက်စီသို့ သွားကြ ကုန်သော လူသားတို့၏ ဘုံဆိုင်ပန်းတိုင် (Common Goal) ပါပဲ။ ကွဲပြားခြင်းကို ညှိနှိုင်း အဖြေရှာခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မင်္ဂလာတစ်ပါးလို့ ကျွန်ုပ် ယုံကြည်ပါတယ်။ (Common Bridge) ဘုံဆိုင် တံတားတစ်ခုတည်း ဆောက်ပေးနိုင်လျှင် ကွဲပြားသော အယူအဆကို တူညီ သော အယူအဆအဖြစ် လမ်းကြောင်း ပြောင်းပေးနိုင်ရုံမျှမက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း လုံလုံခြုံခြုံ လက်တွဲနေထိုင်ရေး ကိုပါ တည်ဆောက်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက် ရင်းမလွဲမသွေ ဆုံတွေ့ ရမည့် ဘုံဆိုင်တံတား (Common Bridge) တစ်ခုသာတည် ဆောက်နိုင်လျှင် စစ်နှင့် ပဋိပက္ခတွေကို ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအသွင်ပြောင်း နိုင်လိမ့်မည်ဆိုတာ သာမန် အတွေးအမြင်ရှိ သူတို့ပင်လျှင် နားလည်နိုင် ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ပြောချင်တာက လူတစ်မျိုးက အခြားလူတစ်မျိုးကို အနိုင်တိုက်ခိုက် နေကြမည့်အစား မိမိတို့ ကိုယ်ကိုယ် မိမိတို့တိုက်ဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့ ရှေးဦးစွာ အားထုတ်သင့်ပါတယ်။ စစ်ပွဲတစ်ရာမှာ လူပေါင်းတစ် ထောင်ကို အနိုင်ရခြင်းထက် မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိအနိုင်တိုက်ခြင်းက တကယ်တိုက် သူ၊ နိုင်သူ၊ အောင်မြင် သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ထဲမှာ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မနာလိုခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်း၊ မိုက်မဲခြင်း၊ အလိုကြီးခြင်း၊ တစ်ယူသန်ခြင်း၊ တစ်ဖက်သတ်အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးကို အပုပ်ချခြင်း၊ အစွန်းရောက် ခြင်းတို့ရဲ့ နေရာတွေမှာ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ ခန်္တီ၊ ပညာ၊ သစ္စာ၊ မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါတရား တွေနဲ့ အစားထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့မှသာအောင် မြင်သူအစစ် တကယ်ဖြစ်မှာပါ။ ထိုမှတစ် ဆင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ပြန့်ပွားနေတဲ့ တစ် ဖက်သတ်၊ တစ်ယူသန်၊ အစွန်းရောက်ဝါဒတွေကို ချေမှုန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ တစ်တွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပါပကမ္မ၊ ပါပ၀ါစာ၊ ပါပသင်္ကပ္ပတွေကို မလျှော့နိုင်၊ မပယ်နိုင် သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး ကျွန်ုပ်တို့ တစ်တွေဟာ အမှောင်ကျနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲက မထွက် မြောက်နိုင် သေးဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို သတိရ၊ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ တစ်တွေဟာ ဒုစရိုက် အမှောင် ကျနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ စမ်းတ၀ါးဝါး လမ်းသွားနေ ကြရသလိုပါပဲ။ သောကနှင့် ဒုက္ခပင်လယ်မှာ လက်ပစ် ကူးနေကြရသလိုပါပဲ။
အမှောင်ရှိလျှင် အလင်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အမှောင်ထဲက လူတွေအတွက် အလင်းရောင်ဟာ တကယ်ပဲလို အပ်ပါတယ်။ အမှောင်နှင့် အလင်းဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ အလင်းရောင်လာလျှင် အမှောင် က ပျောက်ကွယ် သွားတာပါပဲ။ အမှောင်နဲ့ အလင်းဟာ လက်တွဲမနေနိုင်ပါဘူး။ ဒါ ကြောင့် စိတ်ထားယုတ်မာခြင်းတည်းဟူ သော အမှောင်ထဲမှာကျနေတဲ့ ကမ္ဘာထဲသို့ သူတော်ကောင်း တရားအလင်းရောင်တွေ ကိုပို့လွှတ်လိုက်ကြ ပါစို့။ မီးလောင်လျှင် ရေဆိုတာတကယ်လိုအပ်တဲ့ အရာဝတ္ထုပါပဲ။ ကိလေသာ မီးလောင်နေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဓမ္မ ရေစင် ရေအေး သွန်းလောင်းကြပါစို့။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဆူပူခြင်း၊ သောင်းကျန်းခြင်း၊ အကြမ်း ဖက်ခြင်း၊ အနိုင်ယူခြင်း၊ အစွဲ အလမ်းကြီးခြင်း၊ တစ်ယူသန်တစ်ဖက် သတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်း၊ လုံခြုံမှုမရှိခြင်းစတဲ့ အမှောင်ထုကြီး ကျရောက်နေပါတယ်။ ဒီအမှောင်ထုကြီးကို ဓမ္မအလင်းရောင်ဖြင့် အစားထိုးဖို့လိုပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မိန့်ကြား ချက်များရှိပါတယ်။ “တစ်ကမ္ဘာလုံး ကန်းနေတယ်။ ဓမ္မမျက်လုံးပေးရမယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး တုန်လှုပ်နေတယ်။ ဓမ္မနဲ့ ထိန်းရမယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွင်း အပြင်လောင်နေတယ် ဓမ္မနဲ့ ငြှိမ်းသတ်ရမယ်။ အာဏာမက် မောမှုနှင့် သစ္စာတရား မျက်နှာလွဲမှုတို့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးဟာ သွေးစက်တွေ စွန်းထင်းနပြီ။ အရိယသစ္စာသည် ဘာသာ တရားအားလုံး၏ အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ အရိယသစ္စာသည် ကမ္ဘာ့လက်ဟောင်းတရား။ ကမ္ဘာကြီးကိုသင်ကြားဖို့ သစ္စာတရားမှ တစ်ပါးအခြားမရှိပြီ။ သစ္စာဟူသည် လူသားတိုင်း၏ ကိုယ်တွင်းမှာရှိသည်။ ကမ္ဘာကြီး၏ ငြိမ်းချမ်း ရေးသနိ်္တကို သစ္စာနှင့် တည်ဆောက်ရမည်။ သစ္စာကို ဖုံးကွယ်ထားသမျှ ဘ၀ပြဿနာအားလုံး ပြေလည်မှုမရ နိုင်” စသည်ဖြင့် ဟောတော်မူထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးတို့ဟာ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒီလိုအပ်ချက်သည် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးခေါင်းဆောင် အားလုံးကို အလွန်စိန် ခေါ်နေသော အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်အားလုံး ဤစိန်ခေါ်ချက်ကို လက်ခံရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရန် တာဝန်ရှိ ပါတယ်။
လူတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ အပြင်အကာနှင့် အတွင်းအနှစ် သာရ ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်း (ဉာဏ်ပညာ မပါဘဲ)၊ ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ပူဇော်ပသခြင်း၊ ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အခမ်း အနားပွဲလမ်း ကျင်းပခြင်း စသည်တို့ဟာ ဘာသာတရားတိုင်းရဲ့ အပေါ်ကဖုံးနေတဲ့ အကာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကာ (Outer Shell of Religions) တွေဟာ ဘာသာတရားတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကို မတူကွဲပြား ခြားနား စေကြ ပါတယ်။ သို့သော် ဘာသာတရားအားလုံး တညီတညွှတ်တည်း လက်ခံနိုင်တဲ့ အနှစ်သာရရှိပါတယ်။ အဲဒီ Common Core ဆိုတာဟာ ဒါန၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ခန်္တီ၊ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ သန့်ရှင်းသော စိတ်ထားနှင့် သစ္စာတရားတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လူသားအများစုဟာ သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာတရားတွေရဲ့ အနှစ်သာရ ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ထိထိမိမိ မသိကြပါဘူး။ ဘာသာဝင် လူသားတွေဟာ ဘာသာတရားတိုင်း၏ အနှစ်သာ ရနှင့် တကယ်ဆိုလိုတဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို သိဖို့လိုပါတယ်။ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်း ရင်းဟာ တစ်ဖက်သတ် တစ်ယူသန် အစွန်းရောက်ခြင်းအပြင် Religion ၏ အနှစ်သာရကို တကယ် မသိခြင်း သည် အဓိကကျသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပေသည်။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ အားလုံး ဤအချက်ကို ကောင်းစွာ သတိပြု၍ မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရား အသီးသီး၏ ဘာသာဝင်လူသားများကို Common Core of Religion ကို အလေးအနက်သင်ကြား ပို့ချပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဘာသာရေး အနှစ်သာရကို အတွင်း ကျကျ မသင်နိုင်တောင်မှ အပေါ်ယံလောက် သင်ပေးနိုင်လျှင် ဘာသာရေးအနှစ်သာရ နားလည်သော လူသား တွေဟာ နေ့စဉ်ကြုံ တွေ့နေရတဲ့ ဘာသာရေးပဋိပက္ခနှင့် ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေကို လျော့ ကျသွား အောင်၊ လျော့ပါးသွားအောင်၊ ကြီးသွားမည်ကို သေးငယ်သွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြလိမ့်မည်လို့ မျှော်လင့်ပါ တယ်။
ဘာသာတရားရှိတဲ့ လူသားတွေဟာ ဘာသာရေး၏ အနှစ်သာရရောက်အောင် မသင်ကြား မလေ့ကျင့်ဘဲ အပေါ်ယံ အကာမျှဖြင့် ရောင့်ရဲတင်းတိမ် မနေကြဖို့၊ ဘာသာရေး၏ အနှစ်သာရသည် လူသားတို့၏ နှလုံးစိတ် ၀မ်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်၊ လူသားတို့၏ ကမ္ဘာကြီး တည်ငြိမ်ရေးအတွက် တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိအောင် သင်ဖို့နှင့် ကျင့်ဖို့ ဒီကနေ့ ဒီနေရာ ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားဖြင့် အခြား ဘာသာ တရားကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်း မပြုသင့်ပါ။ မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားတစ်ခု ခုဖြင့် အခြားလူတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားတစ်ခုကို ထိခိုက်ပုတ်ခတ် ရှုတ်ချ ခြင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင်မိမိကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ တရားကို ပြန်လည်ပုတ်ခတ်ပြီး၊ ရှုတ်ချပြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လက်ထက်တော်ကာလက ကိုးကွယ်ရာ အမျိုး မျိုး ရှိကြသောလူတို့သည် ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကို ချဉ်းကပ်လာသော အခါ “ဟေ့-မတူကွဲပြား တဲ့ အပေါ်မှာ မဆွေးနွေးကြစို့နဲ့၊ တူညီတဲ့ အပေါ်မှာဆွေးနွေးပါစို့။ တို့ သဘောတူတဲ့ အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးပြီး အနှစ်သာရ ထုတ်ယူ ကြပါစို့” ဟူ၍ ဗုဒ္ဓရှင် တော်မိန့်ဖူးပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် သဘောမတူနိုင်တဲ့ အချက်တွေ ကို ပြောဆိုနေ ကြပြီး ငြင်းခုံနေကြခြင်းဖြင့် ဘာအကျိုးရှိအံ့နည်း။
ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်းကို မေတ္တာဖြင့်ဖြေ ရှင်းရ၏။
အကြမ်းဖက်ခြင်းကို သည်းခံခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းရာ၏။
ဒေါသကို ဒေါသနှင့်တုံ့ပြန်ခြင်း ဖြင့် မငြိမ်းချမ်းနိုင်။
အကြမ်းဖက်ခြင်းကို အကြမ်းမဖက် ခြင်းဖြင့်သာ ငြိမ်းစေနိုင်၏။
အကြမ်းဖက်ခြင်းကို အကြမ်း နည်းနှင့်ဖြေရှင်းခြင်းသည် ပို၍ကြမ်းတမ်း လာစေ၏။
မုန်းတီးခြင်းကိုမေတ်္တာဖြင့် ချုပ်ငြိမ်း စေရာ၏။
ဤသည်တို့ကား ဘာသာရေး မပေါ်မီကပင်ရှိခဲ့သော ကမ္ဘာဦးတရား၊ ဘာသာ တရားအားလုံးတို့၏ Common Core ဖြစ်သည်။
ဤသည်ကား ဓမ္မ…… ဓမ္မဟူသည် သစ္စာတရား။
ဗုဒ္ဓ၊ ဟိန္ဒူ၊ ဂျိန်း၊ ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဆစ် မည်သည့် ဘာသာမှာမဆို ဤသို့ မွန်မြတ်စွာသော သစ္စာတရား တို့ရှိပါသည်။
To understand the Truth is our common solution to our common problems.
သစ္စာတရားကို နားလည်ကျင့်သုံးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀ပြဿနာအားလုံး၏ အဖြေဖြစ်ပါတယ်။
သစ္စာဟူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်မှာ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သစ္စာကိုသိလျှင် သန်္တိဟူသော ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်း ကိုယ်တွင်းမှာ တွေ့ရမည်။ ကိုယ်တွင်းမှာ တွေ့ရသော သစ္စာတရားနှင့် သနိ်္တတရားတို့ကို အပြင်ကမ္ဘာသို့ ဖြန့်ချိ ကြပါစို့။ သစ္စာတရား နေရာတိုင်းမှာ ထွန်းတောက်ပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့ နေရာဤကမ္ဘာ ငြိမ်းချမ်း သာယာရှိကြပါစေ။
အဆင့်မြင့်ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပွဲ
၂၀၁၄၊ ဇူလိုင်လ၊ ၃ ရက်။